बन्दुकले बल्झायो बुनुको ब्यथा ! - Bhuwan Thapa "Bahuvi"
बन्दुकले बल्झायो बुनुको ब्यथा !
कुरा त्यस्तै २०५८/५९ तिरको, देशमा संकतकालले चरम् सीमा पार गर्दै । गाउँमा दुबै थरीका शक्तिको जालो जेलिएको अवस्था । स्थानीय चल्तीका इजाजत प्राप्त बिचरा भरूवा बन्दुकहरूको पनि ज्यान जोखिममा उतिखेर । स्थानीय हात हतियारहरू धमाधम भूमिगत पस्न शुरू । गाउँतिर गएको बेला आफू खेलेको पाखो पखेरो घुम्नु पर्ने मलार्इ । एक दिन घुम्दै जाने क्रममा सालघारी नजिकैको खोल्छीमा बेवारिसे अवस्थामा भरूवा बन्दुकसँग दर्शन भेट । नजिकैको पिंडालु बारीको कान्लामा लगेर खाल्डो खनी पुरपार गरेर टाप कसें मैले ।
जब देशमा शान्ति बहाली, दशैंमा गाउँ गएको मौका, एकाएक बन्दुक गाडेको संझना मडारियो मेरो मानस पटलमा । सरासर लागें सम्बन्धित स्थान तर्फ । निश्चित ठाउँ पत्ता लगाउन महाफसाद पर्यो मलार्इ । संभावित ठाउँहरूको परीक्षण पछि अन्ततः सफल । खन्दै जाँदा बन्दुकको अस्तिपन्चर (नाल र पार्टपूर्जा) मात्र भेटिए माटो मूनि । फेरि, बन्दुकले बल्झायो बुनुको ब्यथा !